တချို့သီချင်းတွေကို မူရင်းအဆိုတော်ဆိုတဲ့ ပုံစံထက်ပိုကောင်းအောင်ဆိုထားတဲ့ music video တွေကို ကြည့်ဖူးကြတယ်မလား? အဲ့လိုမျိုးဆိုတာကို cover ဆိုတယ်လို့ ပြောကြပြီး အများအားဖြင့် အဆိုပိုင်းမှာဝါသနာပါပြီး နာမည်သိပ်မကြီးသေးသူတွေက သူတို့ဆိုထားတဲ့ cover song တွေကို youtube, facebook စတဲ့ social media တွေမှာတင်တတ်ကြပါတယ်။
အခုတစ်ခါမှာတော့ အဲ့လိုမျိုးရွက်ပုန်းသီးလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ အက်မင်စွန်းခိုက်တဲ့ Walk off the Earth ဆိုတဲ့ အဖွဲ့လေးနဲ့ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Walk off the Earth ကတော့ Cover song တွေဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင် ငါးယောက်ပါပါတယ်။ Gianni Nicassio, Sarah Blackwood, Ryan Marshall, Mike Taylor နဲ့ Joel Cassady တို့ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာစဖွဲ့ခဲ့တာပါ။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လို့လဲပြောလို့ရတဲ့ Gianni နဲ့ Sarah တို့ဟာစုံတွဲတွေဖြစ်ပြီး သားလေး ၃ယောက်ရှိပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးဟာ တူရိယာအမျိုးအစားတော်တော်များများတီးခတ်နိုင်တဲ့ ပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးဆိုတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် Sarah တောင်မှ တူရိယာ ၁၁ မျိုးကိုကောင်းကောင်းတီးခတ်တတ်ပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်တွေဆို ဂီတာလေးကိုကီးမှန်အောင် ခေါက်နိုင်ဖို့ မနည်းကြိုးစားနေရတာ ? အားကျချက်ဖဲနော်။
See also >> Taylor နဲ့ Bieber တို့ရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် နာမည်ကြီးလာရတဲ့ တက်သစ်စလေးတွေ
သူတို့အဖွဲ့ရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ တူရိယာမျိုးစုံကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တီးတတ်တာ၊ လက်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ သီချင်းကိုသူများတွေထက်ထူးခြားပြီး လုပ်ပြနိုင်တာတွေနဲ့ အသံအနိမ့်အမြင့်တွေကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တာတွေပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ youtube video လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် တကယ့်ကို အမေးဇင်းဖြစ်သွားမှာပါ။ (အက်မင်လုံးဝကို အာမခံပါတယ်?) ထူးထူးခြားခြား performance လေးတွေနဲ့ဖျော်ဖြေတတ်တဲ့ သီချင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ ဂီတာတစ်လက်တည်းကိုလူငါးယောက်လုံးဝိုင်းတီးပြီး ဆိုထားတဲ့ Somebody that I used to know ဆိုတဲ့ music video ဟာ youtube မှာ ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၁၈၂ သန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သတင်းတွေနဲ့ social media တွေမှာလဲ တော်တော်ပျံ့နှံ့ပြီး လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ video တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Walk off the Earth ဟာ album ၆ခုထွက်ထားပြီးပါပြီ။ လက်တွဲခဲ့တဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးတွေကတော့ Slapdash နဲ့ Columbia တို့ဖြစ်ပြီး အခုလက်ရှိမှာတော့ ကိုယ်ပိုင် band name ဖြစ်တဲ့ “Walk off the Earth” နဲ့ပဲဆက်လုပ်နေပါတယ်။
ကဲ ကမ္ဘာ့အပြင်ဖက်ကိုထွက်လျှောက်ကြည့်ဖို့ အလန်းစား video လေးတွေကိုကြည့်နိုင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ youtubeWalk off the Earth ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါဦးနော်….
PREVIOUS POST Previous post: Rapper ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Taylor Swift
NEXT POST Next post: တက်တူးအသစ်ကို ကြွားလိုက်ပြန်တဲ့ Justin Bieber